ကူးစကျမွနျ ဗီဇကှဲကိုဗဈပိုးအသဈနဲ့ မွနျမာပွညျ ကနျြးမာရေးဝနျကွီး ဖွရေမယျ့ မေးခှနျးမြား – Khit Thit Lann
ကူးစကျလှယျတဲ့ ယူကနေိုငျငံက ကိုဗဈဗီဇကှဲအသဈဟာ ဂပြနျနိုငျငံကို ရောကျရှိသှားပွီ ဖွဈပါတယျ။
ဒီဇငျဘာ ၁၈ နဲ့ ၂၁ ကွားထဲမှာ ယူကနေိုငျငံကနေ လူငါးယောကျဟာ အလုပျ/ကြောငျး
ကိစ်စအတှကျ ဂပြနျကို လကွေောငျးခရီးနဲ့ ဝငျလာခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီထဲက အသကျ ၆၀
အရှယျလူကွီးတဈယောကျဟာ ရောဂါလက်ခဏာစပွပွီး ကနျြလေးယောကျက ရောဂါ
သူတို့ကိုလဆေိပျကနေ Q center ကိုတနျးပို့ခဲ့ပါတယျတဲ့။ သူတို့တှကေို test စဈကွညျ့
လို့ ကိုဗဈ positive ဖွဈနမှေနျး သိတဲ့အခါမှာ ထပျပွီးတော့ လလေ့ာမှုလုပျခဲ့ရာမှာ ယူ
ကနေိုငျငံမှာတှရှေိ့တဲ့ ကူးစကျပိုလှယျသော ကိုဗဈဗိုငျးရပျဈဗီဇကှဲအသဈဖွဈနတောကို
တှရေ့ပါသတဲ့။ ဂပြနျကပိုမိုတငျးကပျြသော နယျစပျလုံခွုံရေးမူဝါဒကို ခမြှတျမယျလို့
ကနြျောတို့ နညျးနညျးဆှေးနှေးကွညျ့ရအောငျ ဒီအကူးစကျမွနျဗိုငျးရပျဈဟာ
ဒီဇငျဘာလလယျနဲ့ လဆနျးကတညျးက ယူကနေိုငျငံကလာတဲ့ ခရီးသှားတှနေဲ့ အတူ
ကနြျောတို့နိုငျငံကို ဒီဇငျဘာလထဲမှာ ယူကနေိုငျငံက ခရီသှားဘယျနှဈယောကျ ဝငျခဲ့ပါ
သလဲ? အဲ့ဒီ ယူကနေိုငျငံက ဝငျလာသူတှနေဲ့အတူ လယောဉျတဈစီးတညျး ဘယျသူတှေ
သူတို့တှအေားလုံး Q ဘယျနှဈရကျဝငျခဲ့သလဲ? Q ဝငျရကျက အရေးကွီးလာပါပွီ။ ဒီ
ကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး စငျကာပူသတငျးတဈခုကို ရေးစရာရှိပါတယျ။ သူတို့တှအေခု
ဘယျရောကျနသေလဲ? ပိုအရေးကွီးတဲ့ မေးခှနျးကို မေးပါမယျ။
Fast Track clearance အမွနျဦးစားပေးဝငျစနဈနဲ့ ဝငျခဲ့သူ ဘယျနှဈယောကျပါသလဲ?
အခုဂပြနျကိုရောကျလာတဲ့ (၅) ယောကျမှာ (၁) ယောကျပဲ ရောဂါလက်ခဏာပွပွီး ကနျြ
(၄) ယောကျက လုံးဝရောဂါလက်ခဏာမပွပါ။
ကနြျောတို့ရဲ့ နယျစပျထိနျးခြုပျမှု အခွအေနကေဘယျလိုလဲ? ကနြျောတို့နိုငျငံမှာ အခု
ဗီဇကှဲအသဈကို ခွရောခံ လိုကျနိုငျတဲ့အခွအေနရှေိပါသလား? သိတဲ့သူမြားဝိုငျးဝနျး
ကူးစက်မြန် ဗီဇကွဲကိုဗစ်ပိုးအသစ်နဲ့ မြန်မာပြည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဖြေရမယ့် မေးခွန်းများ
ကူးစက်လွယ်တဲ့ ယူကေနိုင်ငံက ကိုဗစ်ဗီဇကွဲအသစ်ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၈ နဲ့ ၂၁ ကြားထဲမှာ ယူကေနိုင်ငံကနေ လူငါးယောက်ဟာ အလုပ်/ကျောင်း
ကိစ္စအတွက် ဂျပန်ကို လေကြောင်းခရီးနဲ့ ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက အသက် ၆၀
အရွယ်လူကြီးတစ်ယောက်ဟာ ရောဂါလက္ခဏာစပြပြီး ကျန်လေးယောက်က ရောဂါ
သူတို့ကိုလေဆိပ်ကနေ Q center ကိုတန်းပို့ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ သူတို့တွေကို test စစ်ကြည့်
လို့ ကိုဗစ် positive ဖြစ်နေမှန်း သိတဲ့အခါမှာ ထပ်ပြီးတော့ လေ့လာမှုလုပ်ခဲ့ရာမှာ ယူ
ကေနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိတဲ့ ကူးစက်ပိုလွယ်သော ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ဗီဇကွဲအသစ်ဖြစ်နေတာကို
တွေ့ရပါသတဲ့။ ဂျပန်ကပိုမိုတင်းကျပ်သော နယ်စပ်လုံခြုံရေးမူဝါဒကို ချမှတ်မယ်လို့
ကျနော်တို့ နည်းနည်းဆွေးနွေးကြည့်ရအောင် ဒီအကူးစက်မြန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ
ဒီဇင်ဘာလလယ်နဲ့ လဆန်းကတည်းက ယူကေနိုင်ငံကလာတဲ့ ခရီးသွားတွေနဲ့ အတူ
ကျနော်တို့နိုင်ငံကို ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ယူကေနိုင်ငံက ခရီသွားဘယ်နှစ်ယောက် ဝင်ခဲ့ပါ
သလဲ? အဲ့ဒီ ယူကေနိုင်ငံက ဝင်လာသူတွေနဲ့အတူ လေယာဉ်တစ်စီးတည်း ဘယ်သူတွေ
သူတို့တွေအားလုံး Q ဘယ်နှစ်ရက်ဝင်ခဲ့သလဲ? Q ဝင်ရက်က အရေးကြီးလာပါပြီ။ ဒီ
ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စင်ကာပူသတင်းတစ်ခုကို ရေးစရာရှိပါတယ်။ သူတို့တွေအခု
ဘယ်ရောက်နေသလဲ? ပိုအရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းကို မေးပါမယ်။
Fast Track clearance အမြန်ဦးစားပေးဝင်စနစ်နဲ့ ဝင်ခဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်ပါသလဲ?
အခုဂျပန်ကိုရောက်လာတဲ့ (၅) ယောက်မှာ (၁) ယောက်ပဲ ရောဂါလက္ခဏာပြပြီး ကျန်
(၄) ယောက်က လုံးဝရောဂါလက္ခဏာမပြပါ။
ကျနော်တို့ရဲ့ နယ်စပ်ထိန်းချုပ်မှု အခြေအနေကဘယ်လိုလဲ? ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အခု
ဗီဇကွဲအသစ်ကို ခြေရာခံ လိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါသလား? သိတဲ့သူများဝိုင်းဝန်း